Rakkoon ummata Oromo Maali? -
Rakkoon ummata Oromo Maali? OMN Maali? Yaada Qabsoo Oromo tii fi Gaafiin mirga Amantii wal simatuu? ...
Posted by የኦሮሞ ኣንድነት ሃርነት ግንባር front for independence of United oromia on den 13 oktober 2015
Rakkoon ummata Oromo Maali?
Yaada Qabsoo Oromo tii fi Gaafiin mirga Amantii wal simatuu?
Sheekkotiin Nama hundaafuu wal qixa moo?
Qaamni hawaasaaf dhukkubsatu Eenyu?
Yaada jedhuuf deebisaa kutaa-1ffaa video gabaabaa armaan gadi daawachuudhaan hubannoo gaarii qabaachuu dandeettu jedhe Amana.
Previous Obolewwan keenya kun Lameen Kadir fi Awwal jedhamu Bala Hajji Minaa gubbat dhaqabe irrat Haadha isaan lubbuun baasan isaan lameen gamma akhirat deemaniru.
Next Nuu fi Isaan (Oromoo fi Koloneeffataa)